Haadholiin Akka Da’ima Isaanii Guddifachaa Kennan Dirqisisuun Ni Jira
Muddee 16, 2010
Itiyoophiyaan waaltaalee ijooolleen warra maleeyiin keessatti walitti qabaman cufuuf akkasumas dhabbatoota biyya alaa kanneen biyyatti keessatti ijoollee guddifachaan gara biyya alaatti ergan hedduu harkaa ehama hojii fudhuuf karoorfatte jirti.
Kunis daldalli da’immanii jabaataa dhufe jechuun qeeqexonni ka dubbatan iraa ka’uun akka ta’e beekameera.Waaltaa ijoolleen warra hin qabnee keesa jiraatana kan “ Bright Hope Center” jedhamuuf Daayreekteera ka ta’an Getaahuun Nesibuu Tesemmaa, ijoolleen kun firoottan isaanii Itiyoophiyaa keessaa barbaadamanii itt kennamuu qaban, gara biyya alaatti guddifachaan erguun, carraa isa dhumaa ta’u qaba, jedhan.
Waggaa keessa jirru 2010 keessa qofa ijoollee kuma 5 tu, lammiwwan biyya alaati guddifachaan kenname.Jarreen ijoollee Itiyoophiyaa gara biyya alaatti baasuun guddisan kun, haala kana xumuursisuuf mata mataa ijoolleetti doolaara kuma 20 hanga kuma 35 baasu. Ijoollee kuma shanan waggaa kana keessa alatti ergaman keessaa walakaa ykn 2500 ka ta’an, gara Yunaaytid Isteetisitti ergaman. Kun immo, lakkoofsi ijoollee haala kanaan gara biyya alatti ergamanii ka bara kanaa ka wagggoota dhiheenya dabran keessaa dachaa kudhaniin caaluu agarsiisa. .
Lakkofsii ijoollee Itiyophiyaa kanneen guddifachaan gara biyya alaatti ergaman kun haala ariifachisaan dabaluun, gareelee mirga ijolleef qabsa’an biratti yaaddoo uumeera.Ministriin haajaa alaa kan Amerikaa dhiyee -nya kana ibsa baaseen,ijoollee guddifacha -an biyyaa baasuu waliin wal qabatee,shiraa fi gochi seeran alaa hojjachu akkasumas, dararaa raawwatamu ilaalchisee yaaddoo qabu ibsee jira.
Angawaan Waajirra UNICEF kan Finfinnee jiruu, Dough Webb, akka jedhanitti mallaqqi guddaan sababaa guddifachaan harka namaa galuu kun biyya iyyeettii tokko keessatti gomjii guddaa uuma.Caasaa guddufachaa itti geggeessamuu fi raaw'atamu keessatti gochaaleen seeraa-alaa raaw'atamuu ragaan agarsisuu dabalaa jira, edhan Mr. Webb.
Gabaasaa guutuu MP3 tuquun dhaggeefadhaa